🥇 ▷ Vivo iQOO Neo vs Redmi K20 Pro vs. Mudane 20: Isbarbardhiga Xawaaraha ✅
Vivo iQOO Neo vs Redmi K20 Pro vs. Mudane 20: Isbarbardhiga Xawaaraha
Abuur cusub oo la awoodi karo ayaa markii ugu horreysay ka baxday saacado yar ka hor. Magaca waa Vivo iQOO Neo, tanina waa aalad aan caadi aheyn oo heer dhexe ah, maxaa yeelay waxaa lagu qalabeeyay chipset la isku halleyn karo tan iyo 2018. Taasi waa sababta ay u tahay ikhtiyaar aad u soo jiidasho leh qof kasta oo doonaya waxqabad heer sare ah qiimaha ugu hooseeya. Laakiin waxaa jira aalado kale oo jiilkii ugu dambeeyay ee aad ka dooran karto haddii aad rabto xawaare sare iyo dabacsan.
Kuwan cusub Huawei iyo Xiaomi waa Redmi K20 Pro iyo Mudane 20. Miyey kala duwanaashaha qiimahoodu caddeeyaan iibsashada ama iQOO Neo waa ikhtiyaarka ugu fiican? Isbarbar dhigaan ayaa kuu sheegi doona.
FARSAMADA IYO CODKA 156) 7 x 74.3 x 8.8 mm, 191 g 159.5 x 75.2 x 8.1mm 154.3 x 74 x 7.9 mm, 174 g
U fiirso 6.39 inji, 1080x2340p (Full HD +), Super AMOLED 6.38 inji, 1080x2340p (Full HD +), OLED 6.26 inji, 1080x2340p (HD oo buuxa), IPS LCD
HABKA Qualcomm Snapdragon 855, processor-side sideed ah oo leh celcelis 20.84 GHz Qualcomm Snapdragon 845, processor sideed-side ah oo leh celcelis ahaan 2.8 GHz Huawei Hisilicon Kirin 980, sideed cores oo leh celcelis ahaan 2.6 GHz
MUQDISHO CODKA 6 GB RAM, 64 GB
SOFTWARE Android 9 Pie, MIUI Android 9 Pie, nidaamka hawlgalka Funtouch Android 9 Pie, EMUI
Xiriirka Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0GPS
CAMERAS Saddex geesood 48+ 13 + 8 MP, f / 1.8, f / 2.4 iyo f / 2.4 Saddex geesood 13 + 13 + 2 MP, f / 1.8, f / 2.2 iyo f / 2.4
Kaameerada hore oo leh xalka 12 megapixel / 2.0 Quarter 48+ 16 + 2 + 2 MP, f / 1.8, f / 2.2, f / 2.4 iyo f / 2.4
32 megapixel f / 2.0 kamarad hore
BAARLAMAANKA 4000 mAh, si dhakhso ah 27 W oo leh ganaax degdeg ah 4.0 4500 mAh, si dhakhso ah 22.5 W 3750 mAh, si dhakhso ah 22.5 W
SIYAASADAHA DHAQANKA Laba kaar oo kaarka SIM ah Laba kaar oo kaarka SIM ah Laba kaar oo kaarka SIM ah
Waa maxay sababta Vivo iQOO Neo uu yahay taleefoon qadiim ah oo leh naqshad dabiici ah, Redmi K20 Pro iyo Honor 20 oo aad u xiiso badan marka loo eego suuxinta. Kii hore wuxuu ku qalabaysan yahay kaamirooyin hore oo dib loo isticmaali karo, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ku aragto shaashad aad u cufan oo ku wareegsan shaashadda, inkasta oo shaashadda aan la xusin Kan dambe wuxuu leeyahay godad, sidaa darteed kaamirada hore waxay ku taal shaashadda. Dhabarka dambe ee Redmi K20 Pro wuxuu u muuqdaa mid cajiib ah sababtoo ah dhamaadka dareeraha, laakiin dad badan ayaa laga yaabaa inay doorbidaan Honor 20 maxaa yeelay cabirku waa midka ugu kooban.
Dhibaato halkan kuma jirto: Redmi K20 Pro waxay garaacdaa isbarbardhiga shaashadda. Sharafta 20 waxay leedahay muuqaal IPS ah oo caadi ah, kaas oo aad ka heli karto badiyaa taleefannada dhexe. Vivo iQOO waxay leedahay muuqaal AMOLED ah, laakiin leh midab dhexdhexaad ah.
Redmi K20 Pro aad ayey u saxsan tahay marka loo eego dhiibista midabka waxayna taageertaa HDR10. Tan kale mooyee, ma jiraan goynno iyo dhawaaqyo aan caadi ahayn. Xitaa waxaa ilaaliya Gorilla Glass 5, markaa kani waa gole ka sii waara.
Marka lagu daro soo bandhigid wanaagsan, Redmi K20 Pro sidoo kale waxay kasbataa qalabka. Processor-ka ayaa si cad uga awood badan maxaa yeelay waa Snapdragon 855 chipset for 2019 wuxuuna leeyahay ilaa 8GB RAM Vivo iQOO Neo wuxuu leeyahay jiil hore oo loo yaqaan ‘Snapdragon 845 chipset’, sidaa darteed ma jiro fursad ay ku gaari karto kuwa ay xafiiltamaan.
Maamuuska 20 wuxuu leeyahay Kirin 980, oo ka awood yar kan loo yaqaan ‘Snapdragon 855’, wuxuuna ku qalabaysan yahay 6GB RAM, xitaa noocyada ugu qaalisan. Sheekadu way ka duwanaan doontaa haddaan ka hadlayno Sharafta 20 Pro, laakiin kani taleefanka gacantu waa ka duwan yahay.
Haddii aad ka saarto processor-ka, Vivo iQOO Neo asal ahaan waa udhex dhexe, mana laha kamarad runtii aad ufiican. Xaaladda ayaa isbeddeshay markii ay timid Redmi K20 Pro iyo Mudane 20, oo la yimid dhammaadka cajiibka ah. Mudane 20 waa kumbuyuutarkeyga aan jeclahay oo leh kamarado macro gaar ah iyo 32 megapixel selfie camera, laakiin Redmi K20 Pro wali waa telefoon kamarado u gaar ah oo inta badan la mid ah sawirrada tayada leh.
Ugu dambayntiina xisbigu wuxuu ku guuleystey Vivo iQOO Neo: nolosha batteriga. Thanks to aaladda weyn ee 4500 mAh, Vivo iQOO Neo waxay u badan tahay inay sii dheertahay muddo dheer iyada oo aan dib loo buuxinaynin moodooyinka isticmaalka badankood. Laakiin Redmi K20 Pro waxay ku dallacdaa si dhakhso leh iyadoo ay uga mahadcelinayaan 27 watts oo awood ah. Sharafta 20 waa bateriga ugu niyad jabka leh oo leh 3,750 mAh kaliya.
Vivo iQOO waa kan ugu awooda badan: qiimayaashu waxay ka bilowdaan 230 euro / $ 260 Shiinaha. Redmi K20 Pro wuxuu ku kacayaa inta u dhaxaysa 350 yuuro / $ 395 Shiinaha, halka Honor 20 qiimihiisu yahay 500 euro / $ 565 suuqyada adduunka.
Guud ahaan, Redmi K20 Pro waa taleefanka ugu miisaaman, oo waxaan ku bixin doonaa wax ka badan 120 euro si aan u helo, maxaa yeelay waxay bixisaa chipset-ka ugu fiican iyo kan ugu fiican.
Vivo iQOO Neo vs Xiaomi Redmi K20 Pro vs Huawei Honor 20: Faa’iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Shaashad khafiif ah
Jiritaanka adduunka oo dhan
Naqshad aad u asal ah
Sawirka faraha ee sawirka faraha
Teknolojiyadda ku-dallaca degdegga ah
Batari aad u weyn
Faallooyinka ay taageeraan HyperComments